FANAMARIHANA | NewsMada
Volana vitsivitsy lasa izay, misy minia manova ny endriky ny pejy voalohany amin’ny gazety Taratra. Nentina hanaratsiana olona manokana, na hanelezana vaovao tsy mari-pototra izany. Taorian’izay, nipoitra indray ny fangalana lasitra tamin’ny gazety Taratra . Mazava loatra fa gazety tsy misy io, fa natao fitaovana hoan’ny tsaho sy ny fanaratsiana fotsiny. Efa nandray ny fepetra momba ireo mitady hanapotika olona, indrindra ireo mikasa hanimba ny gazety Taratra, ny orinasa Ultima Media.
Tsikaritra anefa, fa niverina indray izany tato ho ato, ary mbola lasibatra ihany ny gazety Taratra roa andro nisesy izay.
Ireo mpanaraka ny gazety dia mahalala tsara ny foto-kevitra nijoroan’ny gazety Taratra, nandritra ny 16 taona nisiany : ny vaovao mari-pototra hatrany, zaraina amin’ny daholobe.
Iza no ao ambadik’izao finiavana handoto sy hanasoketa izao? Iza no mahazo tombontsoa amin’izany? Ankinina amin’ny tohin’ny fanadihadiana hataon’ny manam-pahefana ny valin’izany.
Ny Fanoratana kosa dia mampanantena hatrany ny mpamaky, na ireo efa nanaraka hatramin’izay, na ireo vao liana amin’izany, fa tsy miova amin’ny lalana efa nosoritany, ary fatra-panaja ny etika sy ny lalana mifehy ny fampahalalam-baovao izahay.
Mampahatsiahy ny besinimaro ihany koa fa noho ny toe-draharaha lalovan’ny firenena, tsy mivoaka amin’ny endriny an-taratasy aloha ny gazety Taratra, nanomboka ny 24 marsa lasa teo. Nivoaka foana kosa anefa amin’ny endriny “elektronika”, izay azo jifaina ao amin’ny E-Media Place, ary zaraina amin’ny alalan’ny mailaka koa, hoan’ireo mpanjifa nanao ny famandrihana.